Xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo Ansixiyey ka doodida Xeerarka shidaalka iyo shaqaalaha . - Wardeeq 24 TV Xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo Ansixiyey ka doodida Xeerarka shidaalka iyo shaqaalaha . Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo Ansixiyey ka doodida Xeerarka shidaalka iyo shaqaalaha...
Xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo Ansixiyey ka doodida Xeerarka shidaalka iyo shaqaalaha .
Xildhibaano ay tiradoodu dhan tahay 16 xildhibaan ayaa shir-gudoonka golaha wakiilada u gudbiyey mooshin ku saabsan xeerka shaqaalaha Dawlada iyo xeerka sahaminta shidaalka sida uu dhigayo xeer hoosaadka golaha wakiiladu.
Mooshinka xildhibaanada oo cod gacan taaga lagu ansixiyey ayaa waxa u codeeyey 58 xildhibaan, waxaa diiday 1 xildhibaan, sidoo kale waxaa ka aamusay 1 xildhibaan .
Previous articleWararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha cudurka Covid-19
Next articleSomaliland oo ka degtey laba kacleynta xanuunka covid-19.